Kungani i-OneDrive ilinde ukulayishwa? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Ukulayisha kwe-Onedrive kulindile - ungaxazulula kanjani
Ukulayisha kwe-Onedrive kulindile - ungaxazulula kanjani
Kungani i-OneDrive ilinde ukulayishwa?
Kubonisa ukuthi i-LayishaIsikhungo siqukethe amafayela angama-kulindwe ukulayishwa, ngoba iseva ayikwazi ukuthintwa. Lawa mafayela azozenzakalelalayishalapho iseva itholakala.
Uke ube nezinkinga zokuvumelanisa ze-OneDrive ezinjengalezi. Kuyinkinga ejwayelekile, kanye nezinye izinto ezimbalwa ezenzeka nge-OneDrive, futhi ngizokukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani. Nazi izinyathelo engizithathayo ukulungisa lezi zinkinga ezivamile zokuvumelanisa ze-OneDrive.
Isinyathelo sokuqala - hambisa igundane lakho phezu kwalo bese ubona ukuthi lithini. Qaphela ukuthi Ukuvumelanisa Amafayela 1 Okusele kuyavela. Ngakho-ke kukhona ifayili elilodwa elinezinkinga zokuchofoza kwesokudla.
Uma kunenkinga ngokuvumelanisa, uzonikezwa inketho yemenyu ethi 'Buka izinkinga zokuvumelanisa', kuleli cala ezingekho. Ngakho-ke siyazi ukuthi sinefayela, ngakho-ke okumele ukwenze ukubuka lelo fayela bese uthola ukuthi kwenzekani. Khetha Vula ifolda yakho ye-OneDrive yeBhizinisi kumenyu bese ubheka ibhokisi lokuhlola eliluhlaza elingahloliwe ohlwini.
Ungabona lapha ukuthi le folda yephrojekthi ayihambelani kahle. Yivule bese ubheka ifayili ebelingavumelanisi futhi uyabona lapha ukuthi leli fayela ledokhumenti lohlu lwephrojekthi le-2018 alivumelanisi. Isixazululo esisheshayo engivame ukusenza ukuthatha leli fayela bese ulihudulela kudeskithophu yakho.
Qiniseka ukuthi isusiwe ohlwini. I-OneDrive izama ukuvumelanisa ifayela futhi. Manje bheka i-OneDrive yakho futhi uzothola ukuthi ayisenazo izinkinga ngokuvumelanisa.
Kulesi simo singalihudulela lapha leli fayela futhi lizovumelaniswa kabusha futhi izinkinga zixazululwe. Manje lapho uthola leli fayela uzobona ukuthi linophawu lokuhlola oluhlaza kulo. Uma ubona i-View Sync Problem kumenyu yakho, imvamisa yingoba wephule omunye wale mikhawulo yefayela nefolda.
Awukwazi ukuvumelanisa amafayela ngamanye nge-15 GB. Igama lefayela eliphezulu yizinhlamvu ezingama-400. Awukwazi ukusebenzisa noma yiziphi zalezi zinhlamvu ezingavumelekile.
Awukwazi ukusebenzisa lawa mafayela noma. Futhi awukwazi ukusebenzisa la magama kumafolda. Futhi qaphela ukuthi uma weqa amafayela ayi-100,000, uzohlangabezana nezinkinga ezithile zokusebenza ngokuvumelanisa futhi ekugcineni, i-OneDrive yeBhizinisi ikhawulela umsebenzisi ngamunye ku-1TB wesitoreji esiphelele.
Uma uke wazama ukususa ifayili futhi walibuyisela endaweni ye-OneDrive, futhi ulungise zonke izingqinamba zokuvumelanisa ukubuka, kepha usenezinkinga zokuvumelanisa ne-OneDrive, kunenye inketho engicabanga ukuthi iyasebenza, ukukhanda ukufakwa kwehhovisi lakho. Iya ku-Panel Yokulawula, iya kokuthi Izinhlelo Nezici, thola i-Microsoft Office 365 yakho, chofoza inkinobho ethi Shintsha bese ulungisa ngokushesha. Chofoza inketho yokulungisa ukuvala zonke izinhlelo zakho ze-Microsoft Office bese wenza ukulungisa.
Lapho ukulungiswa sekuphelile, kuhlole bese ubona ukuthi kuyasebenza yini. Enye into ongayihlola engathinta ukuvumelanisa ukuvuselelwa kweWindows. Qiniseka ukuthi awunazo izibuyekezo ezilindile noma izibuyekezo ezidinga ukuqala kabusha njengoba kukhonjisiwe lapha njengoba lokhu kungaphazamisa inqubo yokuvumelanisa.
Uma usukhathele ezinye izinketho futhi usenezinkinga zokuvumelanisa, kungadingeka ukuthi ume uphinde uqalise inqubo yokuvumelanisa futhi, engingakukhombisa yona lapha. Qhafaza kwesokudla i-OneDrive, ukhethe i-StopSyncing a Folder, qhafaza Stop Syncing, bese uchofoza u-Yebo. Qhafaza KULUNGILE bese ukuvumelanisa kuzoma.
thola amaqembu e-skype
Manje, ngaphambi kokuvumelanisa futhi, kuwumqondo omuhle ukuya ku-C drive yakho bese ubheka ifolda yakho yasekhaya bese ushintshela ku-akhawunti yakho ethile yomsebenzisi. Uzobona ukuthi kune-OneDrive ne-OneDrive yeBhizinisi ngaphandle kwezinguquko zokuvumelanisa, kwesinye isikhathi ziningi. Bheka lapho ubone ukuthi awekho amafayela angavumelaniswanga.
Uma engekho, ngincamela ukususa empeleni lawa mafolda bese ngiwakha kabusha lapho ngivumelanisa futhi. Ungabona futhi indawo yakho yefayela le-OneDrive nawo wonke amafolda. Kungaba wusizo ukuhambisa lawa mafayili endaweni ye-OneDrive yokuvumelanisa, usebenzise ukuvumelanisa ngakho-ke kuyashesha impela, bese ukopisha amafayela lapho eseqedile.
Ngakho-ke ngizokhetha wonke amafayela, ngiwathumele kudeskithophu yami, noma kwenye indawo. Manje ngichofoza kwesokudla ku-Sync New Library futhi futhi kufanele ikhombise izinketho zokuvumelanisa nefolda yakho. Kwesinye isikhathi ngeke ubone indawo lapha bese kungadingeka ukuthi ubuyele emuva uyolungisa ifolda yakho bese ufaka iHhovisi futhi ngaphambi kokuvumelanisa empeleni, kepha kulokhu ngizovumelanisa manje.
Ingibuza ngokusemthethweni imininingwane yokuxhumana. Ngizokhetha i-akhawunti yomsebenzi noma yesikole bese ngingena ngemvume njengoba ngenza ku-Office 365 bese ngingena ngemvume. Kuzoqala ukuvumelanisa amafayela bese uqhafaza inkinobho ukubona indawo.
Uzobona ukuthi uphawu lokuhlola oluhlaza luvunyelwe kumafolda avumelaniswayo futhi i-1 yengezwa ekugcineni kwegama lefolda ukuze lihlukaniswe nelokuqala engilivumelanise ekuqaleni. Uzobona ukuthi zombili zibhalwe lapha. Ukubona isimo sokuvumelanisa, ungaya ku-OneDrive bese ubona ukuthi sekusele u-161.
Uma usuqedile kufanele ubone uphawu lokuhlola oluhlaza lapho futhi kungasali lutho ekuvumelaniseni kwakho kwe-OneDrive. Manje ungaqhathanisa amafayela lapha nalawo owasuse endaweni endala uma nje ufuna ukubheka ukuthi akukho lutho olulahlekile, futhi manje usungasusa indawo yokuqala ye-OneDrive njengoba ingenalutho futhi ingasadingeki. Sethemba ukuthi esinye salezi zixazululo sasebenza ukuze ukwazi ukulungisa izinkinga zakho zokuvumelanisa ze-OneDrive.
Uma unezinkinga sicela uphawule. Ngiyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo yakho. Siyabonga ngokubuka.
Sawubona, uma ufuna ukubona izindatshana eziningi ezinjengalezi sicela ubhalise futhi uma ngabe uyithandile le ndatshana chofoza izithupha bese ushiya amazwana. Ngiyakwazisa kakhulu ukuxhaswa kwakho!
Kungani i-OneDrive ingalayishi?
Zama ukulayishaifayela futhi. ... Ngena ngemvume kuI-OneDrivenge-akhawunti yakho ye-Microsoft, bese uzamalayishaifayela futhi. Awunayo imvume yokungena kufayela (lama-akhawunti omsebenzi noma wesikole kuphela). Uma ifayela likuseva, qiniseka ukuthi ungalivula ifayili, bese uzamalayishafuthi.
Kusho ukuthini ukuvumelanisa okulinde ku-OneDrive?
Uma uphelelwa isikhala efwini,vumelanisakungama.I-OneDriveinomkhawulo ngosayizi wokulayishwa kwamafayela, futhiI-OneDrive Sync ilindileingahle inamathele kufayela elidlula umkhawulo wokulayisha.Juni 8, 2021
Ngikuphoqa kanjani ukulayishwa ku-OneDrive?
Kuphoqa i-OneDriveukuvumelanisa, yinye kuphela into esele esele yenziwe. VulaI-OneDrive'siwindi futhi, bese uqhafaza noma uthephe inkinobho yokumisa isikhashana kusuka phezulu. Ngenye indlela, ungaphinda ucindezele inketho ethi 'Qalisa ukuvumelanisa' kumenyu yayo. Lesi senzo senzaI-OneDrivevumelanisa idatha yakamuva, khona manje.
Kungani kukhona ifayela elilindile ku-OneDrive?
Uma isithonjana sebha yomsebenzi wemenyu ye-OneDrive / imenyu ikhombisa ukuvumelanisa okulindile, ungahle udinge ukususa i-Office Document Cache yakho. Uma ungaboni noma yiliphi ifayela elidala isimo Esilindile, kungenzeka ukuthi ifayela elidala iphutha lokuvumelanisa liyifayela Elifihliwe. Ithiphu: Ukubuka amafayela afihliwe ku-File Explorer, iya ku-Buka bese ubheka ibhokisi lezinto ezifihliwe ku-ribbon:
Yini okufanele uyenze lapho idrayivu eyodwa ithi ukuvumelanisa kulindile?
Ukuxazulula isimo esisalindile sokuvumelanisa kumafayela we-TMP, ungenza okukodwa kokulandelayo: Yilayishe ngesandla ku-onedrive.com. Qamba kabusha bese uyinika isandiso esisha (isb. 'Temp'). Uma ungeke ukwazi ukuqamba kabusha, ifayela lisasetshenziswa. Qala kabusha ikhompyutha yakho bese uyazama futhi. Hambisa ifayela kufolda engekho ngaphakathi kwe-OneDrive yakho. Isule.
Kungani ifayela lami lingalayishi ku-OneDrive?
Ifayela ozama ukulilayisha ku-OneDrive kungenzeka lonakele. Mhlawumbe ifolda ozama ukuyilayisha iyona eyonakele. Dala ifolda entsha ku-OneDrive bese uzama ukulayisha ifayili lapho. Qamba kabusha ifayela kuqala, qiniseka ukuthi livula kudeskithophu yakho (isitoreji sendawo yekhompyutha), bese ulilayisha kabusha ku-OneDrive.
Kusho ukuthini uma ifayela lisalinde ukulayishwa?
Kubonisa ukuthi azikho izinto ezilinde ukulayishwa. Kubonisa ukuthi isikhungo sokulayisha siqukethe amafayela asalinde ukulayishwa, ngoba iseva ayikwazi ukuthintwa. Lawa mafayela azolayishwa ngokuzenzakalela lapho iseva itholakala. Kubonisa ukuthi Isikhungo sokulayisha siqukethe amafayela asalinde ukulayishwa, ngoba ukulayishwa kumiswe isikhashana.